महामारीको मौका छोपेर जबर्जस्ती विधान पारित गर्न खोजिँदै छ : आचार्य - Harekpal Harekpal
महामारीको मौका छोपेर जबर्जस्ती विधान पारित गर्न खोजिँदै छ : आचार्य
नेपाली नेपाली डटकमसँगको एक भिडियो अन्तर्वार्तामा पूर्वउपाध्यक्ष आचार्यले संसारभरी नेपालीहरु कोरोना महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित भै रहेका बेला विशेष महाधिवेशन गर्न खोज्नु बेमौसमको बाजा भएको बताए। नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति संघकै पदाधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरुको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
विधान मस्यौदा समिति कसले बनायो ? उनको प्रश्न छ । संस्थालाई राजनीतिमुक्त बनाउने नाममा चरम राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरुलाई विधानको मस्यौदा तयार पार्न दिनुको पछाडिको मनसाय के हो ? उनले प्रश्न गरे । आइसिसीका ६७ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको असहमति आइरहेका बेला केही पदाधिकारीले मात्रै बलजफ्ति गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
विधान संशोधनका नाममा संघको एनसीसीहरुको स्वायत्तता पनि खोस्न खोजिएको उनको तर्क छ । हामी कस्तो अभ्यास गर्दै छौं ? उनले भने, एनसिसीहरुलाई थप स्वायत्त बनाउनुपर्ने अवस्थामा हामी केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने कोशिष गर्दै छौं ।
विशेष अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन तथा प्रक्रियामा पनि झेल गरिएको उनले बताए । नवौं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि मात्रै विशेष अधिवेशनमा सहभागी हुन सक्छन्, तर, अहिले त नयाँ सदस्य बनाउँदैै प्रतिनिधिका रुपमा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ, उनले भने, नयाँ सदस्यहरुलाई विशेष अधिवेशनमा सहभागी गराउने हो भने निर्वाचन पनि गराउनु पर्यो नि,” उनले भने।
संघको नेतृत्वले गर्नैपर्ने काम नगरेर नगरेपनि हुने काममा चासो राखेको आरोप लगाए । नेपालमा भूकम्प गएको बेला संगठनले कति काम गर्यो, त्यस्तै अवसर यो कार्य समितिलाई महामारीले दिएको थियो, उनले भने, तर, महामारीमा पीडित भएका हाम्रा सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नबाट नेतृत्व चुक्यो । घरमै बसीबसी गर्न सकिने काम पनि यसपाली भएन, उनले भने ।
एनआरएनको आज विशेष महाधिवेशन
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट विदेशमा थप दुई नेपालीको निधन